မှားယွင်းဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည့် သုံးရက်က သုံးကမ္ဘာလောက်ကြာကြောင်း ဖြိုးပြည့်စုံပြော
Episode 98: တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များရဲ့ နောက်တန်းက မိသားစုဝင်များ
ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့ Mon News Agency နဲ့ ဒို့အသံတို့ဟာ အစိုးရနဲ့အပစ်ရပ်လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ မွန်ပြည်သစ်ပါတီက တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေရဲ့ ကျန်ရစ်သူမိသားစုဝင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီး သူတို့ရဲ့လုံခြုံရေး၊ ပညာရေးနဲ့ အခြေခံဝင်ငွေအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး စကားပြောဖြစ်ကြပါတယ်။
ကိုလိုနီခေတ်က မေမြို့လူသတ်မှု၏ အဖြစ်မှန်ကို တူးဆွခြင်း
လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၉၀ ခန့်က မေမြို့တွင် ဗြိတိသျှအစိုးရ၏ ထင်ရှားသော အရာထမ်းတစ်ဦး အသတ်ခံရမှုကို ဖုံးဖိထားခဲ့ကြသည်။ ထိုအချိန်က လန်ဒန်မြို့တွင် ပြုလုပ်နေသော သိမ်မွေ့သည့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲများကြောင့် ဖုံးဖိထားခဲ့သည်ဟု ယူဆရသည်။ ခရစ္စတီယန် ဂယ်ဘာတီ/ဖရန်တီယာ ၁၉၃၁ ခုနှစ်၊ မေလ ၁၇ ရက် နံနက်စောစောတွင်.
Christian Gilberti ရေးသားသည်။
မြန်မာ့စီးပွားရေး ၆ ဒသမ ၈ ရာခိုင်နှုန်း တက်လာမည်ဟုICAEW ဖော်ပြ
ရန်ကုန် မြန်မာ့စီးပွားရေးတွင်အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်လက်လီလက်ကားရောင်းဝယ်မှုကဏ္ဍ များသည် အကြီးမားဆုံး အကျိုးအမြတ်ဖြစ်ထွန်းမည်ဟု စီးပွားရေးအစီရင်ခံစာတစ်ခုတွင်ဖော်ပြထားသည်။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ တွင် ၆ဒသမ၄ရာခိုင်နှုန်းမှ၂၀၁၉-၂၀၂၀တွင် ၆ဒသမ၈ရာခိုင်နှုန်းတက်လာမည်ဟု ခန့်မှန်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာကျော်စာရင်းအင်းအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်သော ICAEW (The Institute of Chartered Accountants in England and Wales) ကနောက်ဆုံး ထွက်ရှိထားသော Economic.
Episode 97: မိုးကိုစောင့်နေတဲ့ စစ်ကိုင်းမှ လယ်သမားများ
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှာ မကြာသေးခင်က မိုးခေါင်မှုတွေရှိခဲ့တာကြောင့် စပါးစိုက် လယ်သမားများ ဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ အစိုးရကတော့ မိုးရွာသွန်းမှုမရှိခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ ကမ္ဘာ့ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုကို ပြစ်တင်ပြောဆိုပါတယ်။ လယ်သမားတွေကတော့ သူတို့အတွက် ရာသီဥတုနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကို အခ
ကေအိုင်အို၏ရေအားလျှပ်စစ်ဝင်ငွေ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခကို အားဖြည့်နေ
ကေအိုင်အိုနှင့်တပ်မတော်တို့အကြား လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခမှာ ကာလကြာရှည်စွာ မပြီးဆုံးနိုင်သေးဘဲ ရှိနေချိန်တွင် ကေအိုင်အေပိုင် ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံသည် မြန်မာအစိုးရလက်အောက်ရှိ မြစ်ကြီးနားနှင့် ဝိုင်းမော်မြို့များသို့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရောင်းချခြင်းဖြင့် ဝင်ငွေအမြောက်အမြား ရရှိနေသည်။
ကရင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံး ဥက္ကဌ နော်အုံးလှနှင့် ကရင်လူငယ် စောအဲလ်ဘတ်ချို၊ စသိန်းဇော်မင်း တို့ကို ကျောက်တံတားမြို့နယ်တရားရုံးမှ ငြိမ်းစုစီပုဒ်မဖြင့် အောက်တိုဘာလ ၂ရက်တွင် ထောင်ဒဏ် ၁၅ရက် ချမှတ်ခဲ့သည်။
လာမည့် နွေရာသီ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား မလုံလောက်မှုကို ရှောင်ရှားနိုင်ရန် ရည်ရွယ်သော တင်ဒါတစ်ခုကို ဝင်ပြိုင်နေသည့် လုပ်ငန်းစုတစ်ခုသည် ပြည်ပမှဝင်ပြိုင်မည့်သူများအတွက် အဟန့်အတားဖြစ်နေသော မဖြစ်မနေပြီးစီးရမည့်ရက် နီးကပ်လွန်းခြင်းနှင့် အခြားစိုးရိမ်ဖွယ်ရာများကို ဖြုံပုံမရချေ။
ရန်ကုန် မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံခြားတိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်ထားသည့် လက်ကား ဖြန့်ချိရေး ကဏ္ဍအတွင်း အစားအသောက်နှင့် အခြား အရည်အသွေးမြင့် ကုန်ပစ္စည်းများကို ဖြန့်ဖြူးရောင်းချနေသော မက်ထရို (မြန်မာ) METRO Wholesale Myanmar သည် Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)လက်မှတ်ရရှိသည့် ပထမဆုံးသော.